प्रधानमन्त्री ओलीको यो कस्तो ‘बर्थ डे’ राजनीति ! | Safal Khabar
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कस्तो ‘बर्थ डे’ राजनीति !
बुधबार, १७ मंसिर २०७७, ०८ : ५२
काठमाडौं । संयोग भनौं या तम्तयारी । मंगलबार नेकपा सचिवालय बैठकमा गुलियो केक खादै नेताहरुले अन्ततः तितो सम्वाद गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारवाट फर्केका छन् । महासचिव विष्णु पौडेलको ६२ औं जन्मदिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले केक काटेर पार्टी शीर्ष नेताहरुका बीचमा मनाउने वातावरण निर्माण गरिदिएका थिए ।
विष्णु पौडेल लगायत नेताहरुका लागि यो ‘सरप्राइज’ थियो । पार्टीभित्र दुई अध्यक्षका बीचमा देखा परेको मतभेद र तिक्त्त सम्बन्धले पार्टी आन्तरिक जीवनमै संकट निम्तिरहेका बेला ओलीले केही समय भएपनि नेताहरुका बीचमा उत्सव मनाउने वातावरण जुटाईदिएका थिए । ओलीले आफ्नो पक्षमा खुलिरहेका नेताहरुलाई खुसी बनाउन र आफ्नो पक्षमा तान्नुपर्ने नेताहरुलाई तान्न बेला बेला बर्थ डे राजनीति पनि ट्याक्टिसकै रुपमा अगाडी बढ्ने गरेको छ । त्यही क्रममा उनले आफ्नो पक्षमा खुलिरहेका महासचिव पौडेललाई खुसी बनाउन सचिवालय बैठक अगाडी ‘बर्थ डे’ पार्टी सेलिब्रेट गरेका हुन् ।
ओलीले ब्यवस्थापन गरिदिएको ‘बर्थ डे’ राजनीतिभित्र ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), वरिष्ठ नेताद्दय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्यहरु इश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाले महासचिव पौडेललाई जन्मदिनको शुभकामना दिए । तर त्यसभित्र पनि उपाध्यक्ष गौतमले पौडेललाई ‘सय वर्ष बाँच्नु ! राम्रो काम गर्दै जानु !’ भन्दै शुभकामना दिएपछि बैठक हल केही समय हाँसो ठट्टामा बितेको थियो ।
उनले बेला बेला बर्थ डे वीस गर्न पार्टी राख्ने गर्छन । तर त्यो पनि कसैको निरन्तरतामा हुदैन् । उनलाई कुन बेला कुन नेताको आवश्यकता पर्छ, त्यही बेला त्यही नेतालाई खुसी बनाउन मात्रै ‘वर्थ डे’ पार्टी राख्ने गरेका छन् । यो उनको ‘वर्थ डे’ राजनीति भित्र पर्ने गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बेला–बेला पार्टी शीर्ष नेताका ‘बर्थ डे’ पार्टी आयोजना गरिदिने मध्येका प्रमुख नेता मानिन्छन् । कतिपयले ओलीको यो ‘ट्याक्टिस’ राजनीति पनि भन्ने गर्छन् । मन अमिलो बनाउँदै बालुवाटार पुगेका नेताहरुलाई केही समय नै किन नहोस्, मुख गुलियो बनाउने वातावरण मंगलबार ओलीले नै जुटाईदिएका थिए । पौडेलको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलका लागि पनि बेला–बेला जन्मदिन ‘सरप्राइज’ बनाईदिने गरेका छन् ।
ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको जन्मदिनमा दुई पटक २०७२ र २०७४ फागुनमा यसैगरी केक काटेर मनाउने वातावरण मिलाएका थिए । नेपालको जम्मदिन मनाउँदै दुवै पटक तत्कालिन अवस्थामा एमालेको पार्टी स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । उपाध्यक्ष गौतमको भने शीर्ष नेताहरुका बीचमा भन्दा पनि परिवारका साथ जन्मदिन केक काटेर विशेष बनाईदिने काम ओलीले यस अगाडी गरेका थिए । नेकपाभित्र विवाद चलिरहेकै बेला साउनमा ओलीले सरप्राइजका रुपमा उपाध्यक्ष गौतमका बावु–छोरालाई बालुवाटार बोलाएर जन्मदिनको केक पार्टी दिएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य पोखरेलको पनि ओलीले सरप्राइज बर्थडे मनाउने वातावरण जुटाईदिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको जन्मदिनमा बालुवाटारमा केक काटेर मनाइएको थियो । अहिलेसम्म हेर्दा ओलीले कि त आफुसँग खुलेका नेताको बर्थ डेमा केक पार्टी आयोजना गरेका छन्, की उनले फकाउनु पर्ने नेताकोमा ।
तर उनले पार्टी एकताको ३० महिनाका बीचमा अहिलेसम्म अध्यक्ष प्रचण्डको ‘वर्थ डे’ वीस सम्म गरेका छैनन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पनि उनले ‘वर्थ डे’ मा अहिलेसम्म कुनै पार्टी राखेका छैनन् । तर अन्य नेताका भने उनले बेला बेला बर्थ डे वीस गर्न पार्टी राख्ने गर्छन । तर त्यो पनि कसैको निरन्तरतामा हुदैन् । उनलाई कुन बेला कुन नेताको आवश्यकता पर्छ, त्यही बेला त्यही नेतालाई खुसी बनाउन मात्रै ‘वर्थ डे’ पार्टी राख्ने गरेका छन् । यो उनको ‘वर्थ डे’ राजनीति भित्र पर्ने गरेको देखिन्छ ।